Telltale ဂိမ်းများစာရင်းကိုရေးပါစာရင်းတစ်ခုလုံးကို Nafig တစ်ခုလောက်ရေးပါ။ ငါက Telltale ဂိမ်းများကိုကျော်ကြားစေတဲ့ဂိမ်းစာရင်းကိုသာလိုချင်တာပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ RUSSIAN ရှိ gta san andreas ရှိလျှို့ဝှက်နေရာများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များမြေပုံကိုဖယ်ရှားပါ။ ဒါကမြေပုံမဟုတ်ဘဲလျှို့ဝှက်နေရာများရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ၁။ Sweet House အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ Ganton Inရိယာတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။
Xbox5တွင်အွန်လိုင်း gta 360 ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ရမည်နည်း။ ၁ ။ GTA: Online ကိုမည်သို့စတင်မည်နည်း။ GTA: Online ကိုဖွင့်ရန်၊ အဓိကအချက်မှာလိုင်စင်ရထားသော GTA 1 disc နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
PS3 ဂိမ်းကို Flash Drive တစ်ခုဘယ်လိုရေးမလဲ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ခိုးကူးထားသော PS3 ဂိမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ပါက ၁) ဗွီဒီယိုညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း၊ Kmeaw မှ ၃.၅၅ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ၂) Multiman ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ၃။ အက်ကြောင်းကိုထည့်ရန် ...
Dark Souls2Tark ၏ကင်းမြီးကောက်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ မြူခိုးတောအုပ်ဘေးမှာတည်နေရာ၌။ Nazka နှင့်အတူရန်ပွဲမီ။ Tark နှင့်သူချစ်မြတ်နိုးရသော Najka တို့ကိုရှေးwhiteကရာဇ်ရှေးဟောင်းဖြူသတ္တဝါများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
The Elder Scrolls6သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်လာသနည်း။ ၆ နှစ်မကြာခင်မှာထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂ နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက် Bethesda Game Studios ရဲ့အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Todd Howard ကနောက်ထပ်စီမံကိန်းတစ်ခုရှိကြောင်းသတင်းထောက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
PS4 BorderlandsDiabloStar စစ်ပွဲများတွင်နှစ်ယောက်အတွက်ဂိမ်းများကိုပြောပြပါ BattlefrontFIFA သို့မဟုတ် PESWWEUFCMortal Kombat ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းများစွာရှိသည်။ http://g4me.ru/ugames/ps4/ မှဂိမ်းနှစ်ခုအတွက် ps4 ဂိမ်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့် download လုပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာများစွာရှိတယ်၊
cs မှာသွားဖွင့်တာကပိုကောင်းတာလား။ အမှုဖွင့်တာပိုကောင်းတာပေါ့ က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဂိမ်းသူ့ဟာသူအတွက် cs go? အဆိုပါ site များ, သာ။ ကောင်း၏, သေနတ်စံချိန်စံညွှန်းများပြုတ်ကျလိမ့်မည်ဟုသာ။ IN …
minecraft server အတွက် port တစ်ခုဖွင့်နည်း ၂၅၅၆၅ XD ဤနေရာတွင် https://otvet.mail.ru/question/25565 XD ဤနေရာတွင် https://otvet.mail.ru/question/183206544 ပိုက်ဆံ - hosting ရှိသည်။ ငွေမရှိ - Hamachi မှ torrent လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ hahahahahahah ကိုကောင်းစွာဖယ်ရှားပါ။
PSP ဂိမ်းများ၏စာရင်းတစ်ခုလုံးကို AIPD (Twin Stick Shooter) မှ ၀ င်ပါ။ (၀.၄) (အတည်ပြုရန်) Angry Birds Star Wars (Puzzle) (4-0) (4/0/2) Assassins Creed IV: Black Flag (သရုပ်ဆောင် / စွန့်စားမှု)) (11-15) (2013/4/0) Assassins Creed ...
အရုဏ်မရောက်မှီတိုင်အောင် အရုဏ်မရောက်မှီတိုင်အောင် Until Dawn ကိုတီထွင်သူများသည် PS3နှင့်4console နှင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့၏သမိုင်းတွင်ဂိမ်းတစ်ခုရှိလျှင် ...
The Witcher 3: Wild Hunt ဘယ်မှာရေအနှစ်သာရရနိုင်မလဲ။ ရေနစ်မြုပ်နေသောလူများထံမှလုယက်သော်လည်းဝယ်ရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အရူးဆိုတာဘာလဲ Farcry ဂိမ်းမှ Vaas ကိုပြောပြီးစကားလုံးအပြည့်အစုံကိုပြောပြပါ။ ရူးသွပ်မှုသည်တူညီသောလုပ်ဆောင်မှုကိုအတိအကျပြန်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြိမ်ကြိမ်၊
DotA Abaddon (Abadon) ရှိသူရဲကောင်းအားလုံး၏အမည်မှာ - Abaddon (Abaddon) (သူသည် Avernus ၏သခင်ဖြစ်သည်။ Dota တွင်) Alchemist (Alchemist) - Razzil Darkbrew (Razzil Darkbrew) ရှေးခေတ်အသွင်အပြင် (ယန္တရား) - Kaldr (Cauldr) Anti-Mage ( Anti-Mage) - Magina (Magina) ပုဆိန် (ပုဆိန်) - Mogul Khan (Mogul ...
အကောင်းဆုံး mods ၏ Pripyat ထိပ်၏ Stalker ခေါ်ဆိုခ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ "အတိတ်၏ Ghosts" နှင့် "သေမင်း၏အဖုံးအောက်မှာ" mod ကြိုက်တယ်။ ၎င်းတို့ကို Klondike 2.0” http://stalker-mc.ru/load/mody_dlja_zp/globalnye/8 တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အဲဒီမှာ mods ၏ဖော်ပြချက်ကိုသင်ရှာနိုင်သည် ...
PS4 firmware ဘာလုပ်သလဲ။ ငါဒါကို flash လုပ်သင့်သလား။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်များ။ ပင်လယ်ဓားပြဂိမ်းများကို flash နှင့်ကစားရန် console တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ မှ ၇၀၀ အထိသုံးစွဲသောသူသည်လုံးဝရနိုင်သည်။ PS500 အတွက်ခိုးကူး firmware ...
PC အတွက် Sony PS4 emulator ရှိပါသလား။ PC ပေါ်တွင် Sony PS4 မှဂိမ်းတစ်ခုဖြင့် disc တစ်ခုစတင်ရန်အကြံဥာဏ်ရှိသည်။ ၁၅-၂၀ နှစ်လောက်စောင့်ပါ၊ ပြီးတော့တောင်မှအားလုံးဂိမ်းများကို ...
PS4 ပေါ်ရှိကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်မည်သည့်အရံပစ္စည်းနီးပါးကိုမဆို PS4 နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများကဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိရိယာများသာအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ မချထားရသေးသည်မှာသေချာသည်မဟုတ်ပါ။
Fallout4တွင်ရုရှားစာတန်းထိုးကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ ၁။ ဂိမ်းဖိုင်တွဲသို့သွားပါ။ ၂။ Strings ဖိုင်တွဲ (Fallout 1DataStrings) မှဖိုင် ၃ ခုကိုစစ်ဆေးပါ။
dualshoock4ကို PC တစ်ခုနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်သင့်တွင်အားသွင်းရန်ဝါယာကြိုးတစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Sonya ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်ပါ။ သင်ဘာဆက်သွယ်ရမည်နည်း။ 1 ။ Standard USB ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,841 စက္ကန့်ကျော် Generate ။